About Us – BIRMADDUU
BIRMADUU GOSPEL MEDIA & PUBLICATION
Birmaduu Gospel Media Ministry and Publication is an evangelical Afan Oromoo media ministry committed to communicating the good news of Jesus Christ, that all people are offered forgiveness of sin freely on account of Christ, by faith in, and draw new life from their identification with him.
Our Mission is serving our Lord Jesus Christ and the growth of His Gospel among Oromo Speaking communities by producing and delivering quality free digital Gospel resources.
For more info, or any other enquires contact us
Sabquunamtii Wangeelaa fi maxxansaa Birmaduu dhaaba tajaajila Wangeelaa ti. Ergaan isaa dhubbii misiraachoo Wangeelaa Karaa Kiristoos argamee, kessaa iyyuu ayyaana Waqayyoo, dhifamuu cubbuu fi jireenyaa haaraa isa dubbii Waqayyoo qulqullu irrattii ijaaramee Afaan Oromoon tamsaasuu fi amantoota jajjabessuudha.
Baruulleen BIRAMDUU kun kan qophaa'e Sabquunamtii Wangeelaa Birmaduun tiini. Akeeki isaa barruulee Wangeelaa Afaan Oromo, Kiristoosiin kan giddu-galeessa godhatan, dhimmota garaa garaa irratii qopheessun amanatoota jireenya amantitti jajjabeesuu dha.
Tajaajila fi Geggeesumma
Mullisa fi Ergaa